China Quad-tombo-kase kitapo fonosana milina SW-P460 orinasa sy mpanamboatra | Lanja mahay
Masinina voafehy vita milina voafehy SW-P460
Mety amin'ny karazan-java-fandrefesana, sakafo puffy, horonam-boninkazo, voanjo, popa, katsaka, voa, siramamy ary sira sns .. izay endrika boribory, slice sy graneta sns.
Fananganana milina: Stainless vy 304
Endrika kitapo azo alaina: Kitapo voaisy tombo-kase, kitapo tombo-kase efatra
Sisiny lafiny: 40- 80mm; Ny sakan'ny tombo-kase amin'ny lafiny: 5-10mm
Soavaly aloha: 75-130mm; Halavany: 100-350mm
Halavan'ny horonan-tsarimihetsika max
Kitapo 50 / min
Ny masinina famonosana tombo-kase 4 dia mety amin'ny karazana fitaovana fandrefesana, sakafo puffy, horonam-boanjo, voanjo, popoka, voamaina, voa, siramamy, sira sns sns izay miendrika horonan-taratasy, silaka ary granule sns.
• Mitsubishi PLC fanaraha-maso miaraka amin'ny valiny azo itokisana avo lenta biaxial sy ny efijery miloko, fanaovana kitapo, fandrefesana, famenoana, fanontana, fanapahana, vita amin'ny asa iray;
• Misaraka boaty boribory mba hifehezana pneumatic sy herinaratra. Feo malefaka, ary azo antoka kokoa;
• Misintona sary mihetsika miaraka amina fehin-kibo servo: tsy dia manohitra intsony, ny kitapo dia miforona amin'ny endrika tsara miaraka amin'ny endrika tsara kokoa; ny fehikibo dia mahatohitra ho reraka.
• Mamoaka ny famoahana horonantsary ivelany: fametrahana tsotra sy mora kokoa ny fametrahana sarimihetsika fonosana;
• Fehezo ihany ny efijery mikasika raha hanitsy ny fiviliana kitapo. Fandidiana tsotra.
• Manakatona karazana mekanisma, miaro vovoka ao anaty masinina.
1. Karazana kitapo firy no azon'ny milina packing?
Ny milina fanangonana kitapo quad voaisy tombo-kase dia ho an'ny kitapo voaisy tombo-kase sy kitapo tombo-kase 4.
2. Manana kitapo maromaro misy lafiny hafa aho, ampy ve ny milina fanangonana iray?
Ny milina fanosinana mijoro dia misy kitapo 1 teo aloha. Ny kitapo taloha dia afaka manao sakany 1 fotsiny, fa ny halavan'ny kitapo kosa azo ovaina. Ilaina ny mpamorona kitapo fanampiny ho an'ny kitapo hafa.
3. Vita amin'ny vy vy ve ilay masinina?
Eny, ny fanamboarana masinina, ny firafitry, ny fifandraisana amin'ny vokatra dia tsy misy stainless 304.
Previous: Kitapo kitapo gusset kitapo milina fonosana mitsangana
Manaraka: Checkweigher an-tserasera ho an'ny boaty tavoahangy kitapo
Masinina fonosana tombo-kase 4
milina fonosana voaisy tombo-kase quad
milina fonosana mitsangana
SUS304 mifangaro 24 loha milanja ambony loha
4 Head Linear Weigher SW-LW4
2 Head Linear Weigher SW-LW2
Fanaraha-maso momba ny lanjan-tsarimihetsika carton amin'ny Internet
SUS304 Standard 10 loha milanja loha an-doha